Haddii uusan Baarlamaanku ansixin Miisaaniyadda 2019-ka maxaa dhacaya? – Kalfadhi
Haddii uusan Baarlamaanka Soomaaliya ansixin Miisaaniyadda 2019-ka inta lagu guda jiro sanadkan, oo ay ka harsan tahay 5 maalin, dowladdu ma shaqeyn doonto. Waxaa istaagi doona dhamaan adeegyada ay bixiso. Shaqaalaheedu (rayid iyo ciidan) waxaa adkaan karta iney hawl dowladeed qabtaan, maxaayeelay uma hayaan miisaaniyad sharci ah, sida ay Kalfadhi u sheegeen sharci-dejiyayaal iyo dhaqaalyahanno.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo ah Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan muuqan rajo laga qabo in maalmaha ka dhiman sanadkan lagu dhameeyo ansixinta miisaaniyadda 2019-ka. “Ma hubo, laakiin marna ma maleynayo in maalmaha sanadka ka dhiman lagu dhameyn karo ansixinta miisaaniyadda” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi.
Kaliya waxay Xukumaddu isticmaali kartaa miisaaniyad 3 bil ah, oo u dhiganta tii ay isticmaashay 3-dii bil ee ugu horreysay sanadkan, sida uu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. “Haddii ay dhacdo in aan laga ansixin Baarlamaanka Miisaaniyadda 2019, waxaa jira sharci Xukuumadda u fasaxaya saddex bilood iney sii isticmaasho lacag u dhiganta miisaaniyaddii hore” ayuu Xildhibaanku yiri. “Lacagtaas waa in aysan ka badan tii sanadkii hore ee bilihii Janaayo, Feebaraayo iyo Maarso” ayuu Xildhibaan Cabdullaahi sii raaciyey hadalkiisa.
Wey soo dhacday in, intii uu dalku lahaa dowladihii ku-meel-gaarka ahaa iyo tii dowladda hadda jirta ka horreysayba, uu curto sanad iyadoon Baarlamaanku meel-marin miisaaniyadda sanadkaas, sida uu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. “Horay sidaan oo kalane waa usoo dhacday” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. “Badanaa dhamaadka sanad walba waxaa caada ahayd in Baarlamaanku galo khalalaaso siyaasadeed iyo dib-u-dhac” ayuu Dalxa raaciyey hadalkiisa.
Xildhibaanku waxa uu u sheegay Kalfadhi ineysan Xukumaddu marnaba isticmaalin karin qarash uusan Baarlamaanku u ansixin, xitaa 3-da bil ee shaqada dowladda lagu badbaadinayo, oo ay Xukumaddu isticmaaleyso miisaaniyad u dhiganta Miisaaniyadda 3-dii bil ee ugu horeysay sanadkan, taas oo uu Dalxa sheegayo iney qasab tahay iney Xukumaddu weydiisato Baarlamaanka. “Waxaa Xukuumadda looga baahan yahay in ay Baarlamaanka weydiisato isticmaalka lacag u dhiganta Miisaaniyadii hore” ayuu yiri Dalxa.
Xildhibaanku waxaa kale oo uu qaba inuu wali Baarlamaanku haysto waqti uu ku ansixin karo miisaaniyadda sanadka dhalanaya. “Wey ahayd in Baarlamaanku meel-mariyo bishaan miisaaniyadda sanadka cusub. Wali gaarsiimo ayey leedahay. Waa iney aqriyaan oo ay wax ku daraan ama ka dhiman, maadaama khilaafkii soo dhamaaday” ayuu yiri Dalxa.
C/raxmaan C/llaahi Dhubbad, oo PhD ka diyaariyay Cilmiga Dhaqaalaha, ayaa Kalfadhi u sheegay in arintan ay dhaawici karto dhaqaalaha qaranka iyo habsami u socodka maaliyadeed ee dalka. “Hay’adaha Caalamiga ah ee dowladda maaliyadda kala shaqeeya, sida IMF iyo World Bank, kalsooni darro ayaa geli karta” ayuu yiri Dhaqaalyahan Dhubbad.
Waxa uu sheegay in sanadka cusub oo curta, dowladda oo aan haysan miisaaniyad sharciyeysan, ay ka dhigan tahay inuu Soomaaliya u bilowday sanad aysan wax qorshe ah u degsaneen. Wuxuuse Dhubbad sheegay in ay suurtagal tahay iney dowladdu isticmaali doonto miisaaniyadda sanadkan dhamaanaya, “maadaama” buu yiri “aan la xirin wali”.
Sanad walba dhamaadkiisa ayaa la meel mariyaa miisaniyadda sanadka cusub ee bilaabanaya, sidoo kalena xisaab-xir lagu sameeyaa miisaaniyadda sanadka dhamaanaya. Haddii aysan Baarlamaanka shaqadaasi qaban waxaa dadka sharciyada-yaqaana sheegayaan in Dowladda Soomaaliya ay mamnuuc ka tahay isticmaalka miisaaniyadda cusub fasax la’aan.
Markii ay ahayd inuu Golaha Shacabka meel-mariyo Xisaab-xirka Miisaaniyadda 2018-ka, wuxuu Guddiga Maaliyadda ee Goluhu soo bandhigay war-bixin muujineysa iney dowladdu musuqday miisaaniyadda, waxaana taas iska diiday Wasaaradda Maaliyadda. Waxaana xigtay inuu Kuxigeenka 1-aad ee Golaha, Mahad Cabdalla Cawad, Wasaaaradda Maaliyadda ku raali-geliyo Golaha hortiisa, Guddiga Maaliyaddana ay Kuxigeennada Guddoonka Goluhu kala direen maalin kadib.
Taas ayaa dhalisay buuq iyo qalalaase siyaasadeed, oo ay midba tu kale u suu dhiibtay. Waxayse arrintu liq isku noqotay markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, garab istaagay sharciyadda Guddiga Maaliyadda, kaas oo ay ilaa iyo hadda Kuxigeennadiisu diidan yihiin inuu shaqeeyo, waana sababta kaliya ee soo hartay ee la rumeysan yahay inuu Goluhu u kulmi la’yahay muddo hal bil dhan. Sharciyan, Baarlamaanku ma meel-mariyo miisaaniyad cusub, iyadoon la ansixin tii hore, sida ay Sharci-dejiyayaal u sheegeen Kalfadhi.
Qore: Xuseen Maxamed
Golaha Shacabka oo Kalfadhigiisa 4-aad ku dhameystay khilaaf iyo ismari waa’